मार्च १ अर्थात् ‘साम इल जल’, किन मनाइन्छ कोरियामा यो दिवस? जानौं यसको इतिहास – Eps Sathi
मार्च १ अर्थात् ‘साम इल जल’, किन मनाइन्छ कोरियामा यो दिवस? जानौं यसको इतिहास
March 1, 2021 2197
दक्षिण कोरियामा हरेक बर्षम मार्च १ तारिख ‘साम इल जल’ का रुपमा देशभर सार्बजनिक बिदा दिने गरिन्छ। ‘साम इल जल’ अर्थात मार्च फर्स्ट मुभमेण्ट डे किन मनाइन्छ? आज यस बिषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु।
मार्च १ तारिख सार्वजनिक विदाको दिनमात्र नभएर यो दिन कोरियाका लागि धेरै महत्वपूर्ण दिन हो। सन् १९१९ को मार्च १ तारिखबाट सुरु भएको आन्दो,लनले नै कोरियालाई जापानको उपनिवे,शबाट मुक्त पारेको थियो। दुवै कोरियामा हरेक वर्ष मार्च १ तारिखका दिन जापानको उपनि,वेश विरु’द्ध लडे’र मुलुकलाई मुक्त बनाएको दिनको सम्झनामा स्वतन्त्रता आन्दो’लन दिवस मनाउने गरिएको छ। तलको फोटोमा ३३ जना त्यतिबेलाका धार्मिक तथा साँस्कृतिक लिडरहरु
कोरियाली प्रायःद्वीपमा सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानको साम्राज्य थियो। देशव्यापी स्वतन्त्रता आन्दोल’नका क्रममा सन् १९१९ मार्च १ तारिखका दिन सात हजार ५०० कोरियाली नागरिक मारि’एका थिए भने ५० हजार भन्दा बढी गिर’फ्तार भएका थिए।
सन् १९१९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको ‘पेरिस शान्ति सम्मेलन’ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सनले कुनै पनि देशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने कुरा बताए। यो कुराले धेरै कोरियनहरुलाई खुशी बनायो। उनिहरुले आफ्नो देश जापानीहरुको क,ब्जाबाट मुक्त हुन सक्छ भन्ने कुरा सोच्न थाले। त्यतिबेला जापानको टोक्योमा पढ्न गएका कोरियाली विध्यार्थीहरुले जापानी उपनिवेशबाट आफ्नो देश मु’क्त हुनुपर्दछ भनि विज्ञप्ती निकाले।
सन १९१९ मार्च १ तारिख दिनको २ बजे ३३ जना त्यतिबेलाका धार्मिक तथा साँस्कृतिक लिडरहरु मिलेर थेह्वाग्वान रेष्टुरेन्टमा भेला भइ कोरिया मुक्त भएको भनि सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरे। सुरुमा उनिहरुले यो कार्यक्रम थापगोल पार्क वा पागोडा पार्कमा आयोजना गर्ने योजना बनाएका थिए। तर हु’लदु’ङ्गा तथा ध’रपक’ड हुन सक्ने आशङ्का गरी एक प्राइभेट रेष्टुरेन्टमा कार्यक्रम आयोजना गरे। उनिहरु यो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रुपमा कसैलाई चो’टप’टक नभइ हु’लदु’ङ्गा नभइ गर्न चाहान्थे। उनिहरुले त्यहाँका गभर्नर जेनेरललाई कार्यक्रमका बारेमा अग्रिम जानकारी समेत गराएका थिए। उनिहरुले प्रह’रीलाई समेत आफैले खबर गरी समात्नु पर्ने भए आफूहरु जे,ल जान समेत तयार रहेको भनि जानकारी दिएका थिए।
प्यागोडा पार्का हजारौं कोरियन नागरिकहरु जम्मा भइसकेका थिए। आफ्ना नेताहरुको ब्यक्र प्रतिक्षा गरिरहेका उनिहरु कुनै नेता नदेखिएपछि एक जवान विध्यार्थी अगाडि बढि कोरिया जापानी उपनिवेशबाट मुक्त भएको भनेर पढेर घोषणा गरिदिए। त्यसपछि त्यहाँ शान्तपूर्ण रुपमा स्वतन्त्रताका लागि आ,न्दोल’न भइरहेको थियो। यो देखिरहेको जापानी सेनालाई असह्य भएपछि आ,न्दोल’न दबाउन बल प्रयोग गर्न थाल्यो।
यसरी देशभर स्वतन्त्रताका लागि आ,न्दोल’नको आगो सल्क्यो। जापानी सेना तथा जापानीहरुले यो आ,न्दो’लन नि’यन्त्रण गर्न सकेनन्। जापानले आफ्नो सेनालाई आ,न्दोल’नको भि’ड हटाउन जथा’भाबी बल प्रयोग गर्न आदेश दियो। शान्तिपूर्ण आ,न्दोल’न दबाउन सेनाले बल प्रयोग गरेपछी ठूला ठूला सामूहिक ह,त्या तथा अ,त्या’चार भयो। धेरै कोरियनहरु जापानी सेनाको ह.,त्या हिं’सा ब,ल’त्कार तथा कु,टपि’टको सिकार भए।
जापानीहरुको ज्या,दति देखेका त्यसबेलाका विदेशी पत्रकारले बर्णन गरेका थिए कि जापानी प्रह’रीले जिम री गाउँका सबै कोरियनहरुलाई एउटा चर्चमा थुनेर बाहिरबाट आ,गो लगाइदिएका थिए। जब चर्च जलि,रहेको थियो उनिहरुले चर्चको सबै झ्यालहरु बन्द गरिदिए ताकि कोहि पनि बाहिर निस्कन नपाउन।
झण्डै १५ सय वटा हिं,सात्म’क घट,ना भएको त्यसबेला जापानी प्रहरी र सेनाले करिब ७ हजार ५०० जना कोरियनको ह,त्या, १५ हजार ८०० लाई घा’ई,ते तथा करिब ५० हजार जनालाई अ,पह’रण गरेका थिए। कोरियनहरुलाई अप,ह’रण गरि सदेमुनको जेलमा थुनेर उनिहरुलाई त,ड्पाइ तड्पा,इ मा र्ने गर्दथे।
यसरी मार्च १ मुभमेन्टले कोरियाको स्वतन्त्रताको ल,डाइलाई एउटा उचाइमा पुर्यायो। सन १९२० को जुन महिनामा बोङदोङ मा कोरियन स्वतन्त्रता योध्दा र जापानी सेनाबिच ठूलो ल,डाइ भयो। त्यसैगरी १९२० को अक्टोबरमा मानछुरीयामा निर्वासित कोरियन स्वतन्त्रता योध्दा र जापानी सेनाबिच अर्को ठूलो लडा’इ भयो।
जापानी सेनाको ज्या,दती र क्रुर’ताले गर्दा धेरै कोरियनहरु देश छाडेर चीन तथा रसियामा निर्वा,सित जिवन बिताउन बाध्य भए। निर्वा.सित अवस्थामा पनि उनिहरुले आफ्नो देशको स्वतन्त्रताका लागि आ,न्दो’लन जारी राखे। १९१९ को अप्रिलमा नि,र्वासित अवस्थामै उनिहरुले चिनको साङघाईमा कोरियाको सरकार गठन गरे। उनिहरुले चीनमै कोरियन स्वतन्त्रता सेना गठन गरे जसलाई त्यसबेलाको चिनिया सरकारले अनुमति दिएको थियो।
कोरियामा पनि जापान बि,रोधी गतिबिधी जारी रह्यो। सन १९४५ पछि जापान हार मान्दै गयो। उसले आफ्नो उपनिवेशलाई केहि खुकुलो पार्यो। सन १९४३ मा युके, अमेरिका र चीन मिलेर कोरिया स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ भनि सहमति गरे। सन १९४५ मा त्यसबेलाको सोभियत युनियनको सेना कोरिया झर्यो र उत्तरतर्फ कब्जा जमायो। सन १९४५ को अगष्ट १५ मा जापानले आत्मसमर्पण गर्यो। दक्षिण तर्फको क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाले कब्जा जमायो भने उत्तर तर्फ सोभियत संघले। यसरी दुइ शक्ति राष्ट्रहरुको टकराबले कोरिया बिभाजित भयो। सन १९५० को जुन २५ बाट दुइ कोरियाबिच यु,ध्द सुरु भयो।
यसरी सन १९१९ को मार्च १ बाटै सुरु भएको कोरिया स्वतन्त्रताको आ,न्दोल’नले नै कोरियालाई जापानी उपनिवेशबाट मुक्त गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको हुनाले यस दिनलाई कोरियामा बडो महत्वका साथ हेरिने गरिन्छ।
Prevयो बर्ष ५ हजार कोरिया लैजाने, भाषा परीक्षा पनि गर्ने तयारी
Nextतीन अर्बको आइपिओ सहित काठमाण्डौ रि इन्सोरेन्स खोल्ने तयारी
रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका झन्डै ४० वकिलहरुलाई प्रहरीले लखेटेर माइतीघर पुर्‍यायो
टिकटक बनाउने क्रममा ज्या,न गयो करुणाको